Umfundisi ubulawe maqede washiswa | Isolezwe
Umfundisi ubulawe maqede washiswa
Isolezwe / 20 July 2012, 12:17pm /
UNKK Jabulisiwe Ndlovu uthi basashaqekile ngokubulawa kukamfowabo uMnuz Mandla Mchunu otholwe eseshisiwe emuva kokuthathwa ngabathile bethi uyobaqinisela umuzi eNdwedwe
UMfundisi Mandla Mchunu obulewe
USASHAQEKILE umndeni woMfundisi wasoSindisweni, eNdwedwe obuye abe ngumthandazi owelapha ngamakhambi esintu okutholwe isidumbu sakhe sishisiwe emuva kokuthi ehambe nabantu abebethi uyobasiza abaqinisele umuzi.
UMfundisi Mandla Mchunu, webandla iNtando kaNkulunkulu kuze kwatholakala ngeSonto ukuthi akasekho emhlabeni emuva kokuthi ehambe nowesilisa nowesifazane abamlanda ekhaya ngoLwesine, bathi uyobabethelela umuzi wabo eNdwedwe.
Udadewabo, uNkk Jabulisiwe Ndlovu, uthe uMchunu wahamba ngoLwesine ekuseni waya ekhemisi lakhe elidayisa imithi yesintu eCanelands, ntambama ezolandwa yimoto eyobethela.
“Ntambama ngabo-7 ebusuku walandwa yimoto emhlophe encane wahlangatshezwa ngowesilisa nowesifazane. Washiya umyalezo wokuthi ahlangatshezwe ngemoto yakhe ayeyishiyile ngabo-9 ebusuku,” kuchaza uNkk Ndlovu.
Uthe kwathi esefonelwa sekufanele ahlangatshezwe, ucingo lwalungasakhali selungena ku-voicemail.
“Sazama ukufona nangoLwesihlanu, lutho. Sasikhathazekile ngoba ibandla lakhe lalizoba nenkonzo kaJulayi ngoMgqibelo. Safona saze sancama, kwathi ngeSonto sanikela eMagongisweni eNdwedwe sithi siyombheka, singazi nokuthi sizoqala kuphi ngoba sasingawazi nomuzi ayeye kuwo,” kusho uNkk Ndlovu.
Uthe basizwa ngomunye osonta ebandleni likaMchunu owafona wabatshela ukuthi ubuze emaphoyiseni ukuthi akekho yini umuntu abamtholile ase emtshela ukuthi ukhona otholwe ngakwaSonkombe.
“Kwayiwa emaphoyiseni asikhombisa izicathulo ezazitholwe eduze kwesidumbu, okwakungezakhe. Ushe wonke umzimba ngaphandle kwezinyawo esisola ukuthi azishanga ngoba wayesafake izicathulo,” echaza uNkk Ndlovu.
Uthe ukubulawa kukamfowabo kuyinto ebihleliwe ngoba laba bantu baqale bafika bezohlola ngoLwesibili bavumelana ngokuthi uzoya kobaqinisela umuzi ngoLwesine.
Uthe ngoLwesithathu bafona bemkhumbuza ukuthi bazomlanda.
UmkaMchunu okuthiwa sekuphele unyaka ashiya umuzi wakhe ubengabonwa nangokhalo njengoba kushone umyeni wakhe.
UNkk Ndlovu uthe sekuthathwe igazi kubafowabo ukuze kwenziwe ulibofuze oluzoqinisekisa ukuthi isidumbu esitholiwe ngesomfowabo ngempela yini.
“Khona nguyena ngoba izinyawo zakhe siyazazi kodwa kusazoqinisekiswa,” kusho uNkk Ndlovu.
Uthe umfowabo ubejwayele ukuhamba izindawo eziningi, ethandaza elapha, ubuya ngisho eLusikisiki kodwa ubengakaze angabuyi.
UCaptain Thulani Zwane wamaphoyisa esifundazweni uthe amaphoyisa aphenya icala lokubulala.